अण्डा एकदिनमा कति खाने ? कसरी खाने ? « Drishti News – Nepalese News Portal
अण्डा एकदिनमा कति खाने ? कसरी खाने ?
१५ आश्विन २०७८, शुक्रबार 11:38 am
काठमाडौं । स्वास्थ्यका लागि अण्डा पनि फाइदाजनक मानिन्छ । तर यसलाई पनि खाने समयतालिका मिलाइएन भने हानिकारक पनि गर्छ । अण्डा एकदिनमा कति अण्डा खानुपर्छ र पकाउने सही तरिका के हो भन्नेबारे ध्यान दिनु जरुरी छ ।
चिकित्सकहरु पोषक तत्वले भरपूर भएकाले खानामा अण्डा सामेल गर्न सल्लाह दिन्छन् । यो भिटामिन ए, बी, डी र बी १२ का अलावा लुटीन र जीएजेन्थिनजस्ता पोषक तत्वले भरपूर हुन्छ ।
अण्डामा कोलेस्टेरोल हुन्छ भन्ने प्रमाणित भएपछि ब्रिटिश हार्ट फाउण्डेसनले सन् २००७ मा हप्तामा तीनवटा अण्डामात्र खाने सल्लाह दिएको थियो । नेशनल हेल्थ सर्भिसका अनुसार अण्डामा केही कोलेस्टेरोल त हुन्छ तर हाम्रो रगतमा पाइने कोलेस्टेरोलभन्दा कम हुन्छ ।
केही व्यक्तिलाई अण्डाको एलर्जी हुन्छ खासगरी ५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई यस्तो समस्या हुन्छ। अण्डाका एलर्जीका
केही लक्षण ?
यसको एलर्जी ज्यान लिने खालको हुँदैंन । तर एलर्जी भए तत्काल डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्छ । स्रोत स्वास्थ्यखबर